FRP daylighting jira WW1025 - China hubei Shengyu Building Materials
FOB Price: 2.99-8.99 / metres / mativi mamita
The FRP daylighting jira, kunonziwo Washington City Offices zvakasimbisa polyester daylighting papepa, inoumbwa mukuru-kuita unodzivirira firimu, unsaturated polyester nebwe giberglass.Popular ayo stablility uye mukurumari, chichiri kushandiswa munhandare, girinihausi, varaidzo kuti matenga uye masvingo.
mhando ukobvu upamhi Cover Width urefu uremu ruvara
TT980 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 980mm 900-1200mm sezvo Required 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, Translucent
WW1025 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 1025mm 940-1200mm sezvo Required 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, Translucent
Shengyu FRP daylighting jira, ayo Anti kukwegura Kamudzira anogona zvinenge zvachose filtrate nemamwe-Violet uye kuti upenyu basa makore anopfuura 20.
High Impact simba
Shengyu FRP daylighting jira, pamwe mukuru wayo waivako nokuda Anti-rova uye pasi flexural modulus, chinogona kutakura kurwisa mhepo simba kana vamwe.
Shengyu FRP daylighting jira, ayo chikumbiro tembiricha anoda kubva-38 to110 pamwe yakagadzikana geometry saizi.
FRP nebwe riri husingakwanisi nemakemikari akawanda zvakadai acid, alkaline, munyu, etc.
Shengyu FRP daylighting jira, vachigamuchira kupinza Kamudzira uye Anti-kukwegura layer pave ruvara kudzikama uye chiedza transmittance.
The pose denga pepa riri gobvu uye reHaraki zvimwechetezvo sezvo lotus mashizha. Shona haadi yekubata guruva uye hunogona kungoparara kucheneswa kuburikidza mvura.
The chiedza kutapurirana Shengyu FRP chiedza pepa iri 60-85%. Chiedza kuburikidza FRP chiedza jira Anoparadzira uye munyoro. Shona haangaiti kuumba chiedza bhendi kuitira kuti indoor yakajeka.
Next: Asa uPVC Corrugated denga papepa W1025
The FRP daylighting pepa iri rakasimba daylighting chigadzirwa rakagadzirirwa weathering resistance.install akanyatsoriongorora nokutya kukuvadzwa kana kumarwa, izvo chinogona kukanganisa basa rayo life.In pamakumbo vadyi of daylighting pepa pamwe ruvara simbi papepa, aichimbova achaurawa pamusoro yokupedzisira.
Gadzirisa gadza Method Incrrect gadza Method
1.The dzikapupurira dhayamita anofanira kuva 2-3mm kupfuura kutara sikuruwa dhayamita nokutya kuwedzera kunokonzerwa nokupisa uye marwadzo anokonzerwa nechando.
2.A shoma isapinda pesin anofanira kuiswa pakati sikuruwa uye daylighting pepa kuti isapinda uye dustproof nemigumisiro.
3.A miviri mativi namira tepi inofanira kuiswa pamusoro purline nokuda kwokutya rakananga kukweshera pakati daylighting papepa uye purline.
4.There vanofanira kuva mbiri mbiri madziro namira matepi ari wehunyambiri pamakumbo pamwe nzvimbo kwenguva isapinda kushanda.
5.In kuchengetera munhu daylighting jira, regai kuisa kushushikana pamusoro payo nokuda kwokutya pakumedura kwayo.
1.The kuruboshwe chikamu mune apa mufananidzo ndiwo yedu varumbidzwa marongerwo, ukuwo rworudyi chikamu ndiye inadvisable mumwe.
2.The nzira pamakumbo muhudyu pakati daylighting papepa uye ruvara simbi papepa yakanakisisa ndiyo izere pamakumbo vadyi kubvira anooneka zvikuru nemichinjiziri kusvika eaves kana kubvira anooneka zvikuru nemichinjiziri nechepakati purlines nokuda kwezvikonzero zvinotevera:
I The daylighting papepa uye simbi jira vari pasi yakasiyana Kuumbwa processes.As isu tese, ndarira papepa anoenda kuburikidza nechando rinopfungaira kwacho, zvichiguma duku intersecion yorusvingo, ukuwo daylighting papepa inoenda thermosetting kwacho, zvichiguma achikura mharadzano angled. (kana mharadzano angled hapandiringani, kushushikana kwaro vasara uchava mukuru kwazvo, saka kuti zvichava pasi cracking walnut kana kunyange vachipaza kushandiswa.) saka, zviri zvikuru here kuisa daylighting pepa pamusoro simbi pepa .
II.For chikonzero kumusoro, daylighting jira kunoita kuva zvishoma hombe chinozunguzirwa penyika kupfuura simbi jira anoita, iyo inobatsira ndikwane daylighting pepa akatarira simbi pepa better.On kudaro, kana simbi jira rakaiswa pamusoro daylighting pepa , ivo hahuzozadziki saka zvakanaka, kunyange zvichiita chinozunguzirwa penyika cracking walnut pamusoro daylighting jira, izvo yatichawana kutungamirira mvura leakage.A kuramba chinjikira siyana daylighting machira haina kuva zvakare rakafara, kana vashandi kuvaka kuti mutsike pamusoro ari daylighting bhendi mumunda rokuvaka muitiro, izvo zvingaita kuti cracking walnut pamusoro daylighting pepa (kukonzera mvura leadage) kana kunyange njodzi (mumwe anowira pasi kubva kumusoro)!
Normal raiva pedyo nebundu Drawing
Common waveform jira pamakumbo vadyi: kuisa daylighting machira zvakananga padenga dzakapoteredza profiled simbi machira chete butyl rabha tepi makamuisa mapfupa panhivi simbi machira; The magumo achitevedza daylighting jira pakureba anofanira kupfeka purline, pindana ari simbi pepa rakanyorwa pamusoro 250mm, pamwechete nenhindi maviri 2 * 20mm butyl rabha matepi ari pamakumbo pamwe mugumo.